မေးခွန်း - “ကျွန်တော်ဘဝမှာ ပျော်ရွှင်မှုကို ရရှိခံစားနေပါတယ် ။ ‘ဘုရား’ဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှုအယူအဆကနေမှ ဘဝရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေရမယ်လို့ ဘာကြောင့်ခံယူဖို့လိုသလဲ?”
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြေ - မှန်ပါတယ်၊ ဘုရားမလိုအပ်ပဲ သင့်ဘဝမှာ ပျော်ရွှင်မှုတွေရရှိနိုင်ပါတယ်။ လူမြောက်များစွာက စည်းစိမ်ဥစ္စာချမ်းသာမှုတွေ၊ ကြင်နာတတ်တဲ့ မိသားစုတွေနဲ့ ပြသနာကြီးကြီးမားမားမရှိပဲ ပျော်ရွှင်ခံစားနေကြပါတယ်။
သို့သော်လည်းပဲ အခုချိန်မှာ ကြီးမားတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေသင်ပိုင်ဆိုင်ပေမယ့် အဲဒီအထဲမှာ ဘုရားပါရှိမှသာ သင့်ဘဝဟာပိုပြည့်စုံလာမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားကိုသိခြင်းဟာ ပြောင်းလဲမှု ကြီးကြီးမားမား ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒီအတိုင်းစဉ်းစားကြည့်ပါ။ ကလေးတစ်ယောက်အတွက် သုံးဘီးစီးတာ ( ဆိုက္ကား )ပျော်စရာကောင်းမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီကလေးကြီးလာတဲ့နောက် ကားစီးတဲ့အခါမှာ သုံးဘီးဟာ ( ဆိုက္ကား ) အတော်ပျင်းစရာကောင်းသလိုဖြစ်နေမယ်။ ဘဝမှာလိုချင်တာအကုန်ရတယ်လို့ သင်ထင်ချင်ထင်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါဟာ သုံးဘီးစီး ( ဆိုက္ကားစီး) နေတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အမြင်သဘောလောက်ပဲ ဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါ။
ယေရှုက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကို အခြားဘယ်အရာကမှဖြည့်ဆည်းပေးတာနဲ့မတူအောင် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်လို့ ပြောပါတယ် (ရှင်ယောဟန် ၄း၁၃-၁၄။ ၆း၃၅)။ အဲဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့လူသားတွေသာမက ဝိညာဉ်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လူသားတွေ ဖြစ်ကြလို့ပါပဲ။ ဘုရားသခင်ကသာ ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရဲ့ဆာလောင်ငတ်မွတ်မှုကို အပြည့်အဝ ကျေနပ်ဖြည့်တင်းပေးနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘုရားမပါဘဲ ကျွန်တော်တို့ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပေမယ့် ဘုရားကိုသိရှိမှသာ စစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှု၊ ကျေနပ်မှုနဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှုတွေကို ကျွန်တော်တို့ အမှန်တကယ်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးတော့ တမလွန်နဲ့ဆိုင်တဲ့မေးခွန်းလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်က အကန့်အသတ်သာရှိတဲ့ သင့်ရဲ့အချိန်ဟာ ဘုရားရဲ့စမ်းသပ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ကော? သူ့ကိုသိလာမလား၊ သိမလာဘူးလားဆိုတဲ့ စမ်းသပ်ကြည့်ရှုမှုမျိုးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်လေ? အဲလိုသာဆို အဲဒီစာမေးပွဲကြီးကို သင်ဘယ်လိုဖြေဆိုမလဲ? (ရောမ ၁ ထဲမှာပြောသလို) သင်ဟာ ဘုရားသခင်ကိုသိရှိခြင်းကို [သမ္မာတရားကို] “အဓမ္မဖြင့် ဆီးတားနှိပ်စက်”နေပါသလား? ဘုရားသခင်တည်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားတွေ သင့်ဘဝမှာတွေ့ရဲ့လား၊ သို့မဟုတ် တွေ့လျက်နဲ့ ဘုရားသခင်ကို အသိအမှတ်ပြုလက်မခံချင်လို့ပဲလား?
ဘုရားသခင်ကို သင့်ဘဝမှာ ဘယ်တော့မှ မရရှိဘူးဆိုရင်ကော? ဟုတ်ပြီလေ၊ သင်ပြောခဲ့သလို၊ ဒီလောကရဲ့ စည်းစိမ်သာယာမှုတွေမှာ ဆက်ပြီးပျော်ပိုက်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်အတွက် အဲဒီပျော်ရွှင်မှုဟာ လူ့ဘဝမှာတင် ပြီးဆုံးသွားမယ်ဆိုတာသတိပြုပါ။ ဘာပြုလို့လဲဆိုတော့ ဘုရားသခင်ကို သင်ငြင်းပယ်ခဲ့လို့ပါပဲ။ သင်ဟာ ဆုကျေးဇူး (သင့်အသက်တာ) ကိုသာလက်ခံပြီး ဆုကျေးဇူးပြုသူကို ငြင်းပယ်ခဲ့လို့ပါပဲ။
ဘုရားသခင်က နောင်တမလွန်ဘဝအတွက် အံ့သြဘွယ် ဖန်ဆင်းပြုလုပ်ထားတဲ့ မြောက်များစွာသော အရာတွေကို အခုချိန်မှာ ထင်ရှားမပြသေးဘူးဆိုရင်ကော …ဘုရားကို မငြင်းပယ်ခဲ့တဲ့ သူတွေအတွက်ကော
ကားစီးတာက ဆိုက္ကားစီးတာထက် ပိုကောင်းသလို နောင်တမလွန်ဘဝက အခုဘဝထက် အဆပေါင်းများစွာ ပိုကောင်းတယ်ဆိုရင်ကော
ဘုရားကိုသင် ငြင်းပယ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒါတွေကို တွေ့မြင်ရတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။